Fetin’i Masina Maria tsy tokony hampisaraka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mankalaza ny fetin’ny Fampakarana an’i Masina Maria any an-danitra isika ny 15 Aogositra. Raha i Masina Maria sy ny mombamomba azy anefa no asian-dresaka, dia maro no alaim-panahy hisaina avy hatrany ny tsy fitovian-kevitra aterany. Fandalinana.
Heverin’ny olona sasany ho porofo manamarina ny fisarahan’ny mpino kristianina ny fanapotehana ny sary vongan’i Masina Maria tao amin’ny fokontanin’Antsororokavo Fianarantsoa (Lakroan’i Madagasikara, laharana faha 3879, 3 aogositra 2014). Dia mipetraka ny fanontaniana hoe: mampisaraka ny mpino kristianina ve ny fety rehetra fanajana an’i Masina Maria sa misy tokony hodinihin’ny tsirairay lalina kosa ny sasany: sao mba manampy azy hino bebe kokoa sy hifikitra amin’i Jesoa ?
Ny mampiavaka ny Fiakaran’i Jesoa amin’ny Fampakarana an’i Masina Maria any an-danitra
Na amin’ny teny malagasy, na amin’ny teny frantsay, dia miavaka tsara ireto fety anankiroa ireto. Raha miteny hoe “Ascension” ny Frantsay, isika Malagasy kosa miteny hoe Fiakaran’i Jesoa any an-danitra. Efapolo andro manaraka ny fetin’ny Paka ny Eglizy no mankalaza izany. Na dia miteny hoe “nakarina ho any an-danitra” i Lioka ao amin’ny Evanjely nosoratany (Lk 24, 51), ka naveriny indray ao amin’ny Asan’ny Apositoly hoe: “dia nakarina teo anatrehan’izy ireo... i Jesoa (Asa 1, 9), dia nohamafisiny tsara ao amin’ny fitantarany fa “niakatra any an-danitra” (Asa 1, 11) Izy. Ny fahefana sy ny herin’ny tenany amin’ny maha Andriamanitra Azy no niakaran’i Kristy any an-danitra. Fantany mialoha izany, satria nampiomana ny sain’ireo Apositoly izy nandritra ny fotoana niarahany tamin’izy ireo: “Handeha ho any amin’ny Raiko aho”, “Handeha aho hanomana toerana ho anareo” sns.
Ny an’i Masina Maria kosa dia “Assomption” no filaza azy amin’ny teny frantsay, izay adikantsika hoe Fampakarana an’i Masina Maria any an-danitra. Manazava koa i Mompera Carlo BERTON ao amin’ny boky nosoratany“I Maria: Renin’i Jesoa”, hoe“Nakarin’ny herin’Andriamanitra izay tompon’ny fanavotana izy. Vokatry ny fanavotana nataon’i Jesoa Zanany izany, ilay Mpandresy ny fahafatesana” (p.130).
Na dia mazava be toy izany aza ny mampiavaka ireto fety anankiroa ireto, dia isan’ny vato fanafintohinana ho an’ny sasany ny fandikana vilana azy, ka mampametra-panontaniana ny maro hoe: Tsy nandalo fahafatesana toa an’i Jesoa Zanany ve izany i Masina Maria?
Ny zavatra tsy fantatra no mampisalasala sy tsy mampino ary mampanaonao foana. Izany indrindra no mitranga raha vao ity fetin’ny 15 Aogositra ity no resahina, satria misy mihevitra tokoa fa tsy maty i Masina Maria fa nampakarina velona any an-danitra. Sao vokatry ny tsy fahalalana ny marina momba ny fety tokoa izany, ka mahatonga fandikana vilana ny tena heviny ?
Ny fampianaram-pinoana fototra omen’ny Eglizy
Mazava tsara ny famaritan’ny Konsily Vatikana faha 2 ny fetin’ny 15 Aogositra, izay mamerina ny fanambarana nataon’i Papa Pie faha 12 tamin’ny 1 novambra 1950 (foto-pampianarana apositolika Munificentissimus Deus) : “...nony tapitra ny fiainany teto an-tany, dia nampakarina vatana sy fanahy any amin’ny voninahitra any an-danitra... mba hitoviany kokoa amin-Janany... nandresy ny fahotana sy ny fahafatesana” i Masina Maria (Fiangonana Fahazavan’izao tontolo izao, LG § 59).
Mbola azo heverina ho tsy fahafatesana ihany koa ve ilay Torimaso lava, andikana ny fety ortodoksa hoe “Dormition”?
Efa tany amin’ny taonjato fahadimy sy fahenina no nankalaza ny 15 Aogositra ny fiangonana kristianina tatsinanana. Torimaso lavan’i Masina Maria no ilazany azy io, na “Dormition” amin’ny dikan-teny frantsay. Tsy hoe voakaikitr’irony lalitra mampatory irony akory i Masina Maria na koa matory foana no raharahany any an-danitra, fa raha izany dia tsy niseho tetsy sy teroa Izy : Lourdes, La Salette, sns. Fantatsika rehetra fa ny Malagasy fahiny, raha hiteny fa maty na nodimandry ny Mpanjaka iray, dia ataony hoe “niamboho ny mpanjaka”. Tsy misy valaka amin’izany ity teny hoe Torimaso lava ity. Ary ny Soratra Masina ihany dia ampy hanazava amintsika ny tena dikany: “Matory i Lazara sakaizantsika, ka handeha Aho hamoha azy”, hoy i Jesoa tamin’ireo Apositoly (Jo 11, 11). Zavatra hafa no tao an-tsain’ireo mpianany, ka voatery nanome fanazavana misimisy kokoa i Joany mpanoratra ny Evanjely nanao hoe : “Ny nahafatesany no nolazain’i Jesoa, nefa torimaso tsotra izao kosa no nampoizin’izy ireo” (Jo 11, 13). Dia i Jesoa mihitsy no nanazava tsara tamin’ny farany hoe: “Maty i Lazara”(Jo 11, 14). Ny Torimaso lavan’i Masina Maria izany dia tsy inona fa fahafatesana am-piadanana.
Mazava tsara amintsika rehetra amin’izao àry, fa tena nahatapitra ny fiainany tety an-tany tokoa i Masina Maria, fa raha tsy izany, dia mandringa ny asa fanavotana nataon’i Jesoa Zanany nandalovan’ilay Andriamanitra tompon’ny Aina ny lalan’ny fahafatesana, raha toa ka tsy nananjara tamin’izany lalan’ny miankandrefam-baravarana izany ilay Renin’Andriamanitra nanome ny Zanany ny fomban’ny olombelona afa-tsy ny fahotana irery ihany.
Araka izany, dia isan’ny fety mampiray ny mpino kristianina rehetra ny fetin’ny 15 Aogositra nampakarana an’i Masina Maria any an-danitra, satria fandraisana anjara miavaka amin’ny fitsanganan’ny Zanany ho velona (Katesizin’ny Fiangonana Katolika, § 966), ilay Lahimatoa amin’ny maty rehetra. Ary na inona na inona ny antokom-pinoana maha kristianina antsika dia manao fiekem-pinoana hoe : “Izaho mino ny fitsanganan’ny vatana amin’ny maty”. Samy miandrandra ilay fahasoavana nomena an’i Masina Maria mialoha isika tsirairay avy, raha mbola mihevi-tena ho kristianina ihany, dia isika izay “misento ao anatintsika ao, miandry ny fananganan-janaka amam-panavotana ny vatantsika” (Rom 8, 23). Santarin’i Masina Maria, ilay vehivavy nino voalohany ny teny rehetra nolazain’ny Tompo taminy ny fanantenana ilay Paradisa manomboka ety an-tany, ka hahatanteraka ny faminanian’i Md Paoly hoe : “Ary rahefa mitafy ny tsy fahalòvana ity mety lò ity, ka mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka amin’izay ny teny voasoratra hoe: Efa noresena ny fahafatesana ka levona” (1 Ko 15, 54). Manamafy izay ny voalazan’ny Papa Fransoa tamin’ny toriteniny ny 15 aogositra 2013 hoe : “i Masina Maria dia sady renintsika no rahavavy ary anabavintsika”: noho izy voaloam-bokatry ny voavotra noho ny fitsanganan’i Jesoa Kristy.